I-Sociologist's Take the Feminism
Sciences soLuntu Iindaba kunye neengxaki
Yiyiphi intsingiselo yowesifazane yintlankqalazo echasayo kakhulu kwikhulu leminyaka elinamanci mabini nanye. Ngokuqhelekileyo, iinzame zokuchaza isetyhini zitshitshiswa ekuphenduleni izicatshulwa okanye ukuxothwa kwayo njengentukuthelo, engenangqiqo kunye nokuzonda abantu. Eli gama ngokwalo lixhatshazwa kakhulu kwaye lihlekisiwe ukuba abantu abaninzi baxela ngokucacileyo ukuba "ababesetyhini," nangona bafuna ukuba baninzi abaxabisa iimbono kunye neembono zobufazi.
Ngoko yintoni okwenene ubufazi?
Ukulingana. Akunjalo kuphela kubafazi, kodwa kubo bonke abantu, kungakhathaliseki ukuba isini, ubulili, ubuhlanga, inkcubeko, unqulo, ubuchule, iklasi, ubuzwe, okanye ubudala.
Ukufunda ubufazi besuka kwimbono yezenhlalo kubangela ukuba konke oku kukhanya. Kubonwa ngale ndlela, umntu unokubona ukuba ibhinqa ayizange ibe yindoda malunga nabasetyhini. Ugxininiso lwe-critic feminist yinkqubo yentlalo eyenzelwe ngabantu, ekhokelwa yimibono yabo yehlabathi kunye namava , kwaye idibanise ukunika amalungelo abo kunye namava abo ngexabiso labanye.
Ngubani abo bantu, ngokobuhlanga kunye neklasi, phakathi kwezinye izinto, zihluka ukusuka kwindawo ukuya endaweni. Kodwa kwinqanaba lehlabathi, kwaye ngokukodwa kwiiNtlanga zeNtshona, abo babesemagunyeni baye bahlala bebutyebi, abamhlophe, i- cisgender , kunye nesondo, kunye neyona nto ibalulekileyo yembali kunye nexesha langoku. Abo basemagunyeni banqume indlela abantu basebenza ngayo, kwaye bayigqiba ngokusekelwe kwimibono yabo, amava kunye neminqweno, eyona nto ingaqhelekanga ekusebenziseni ukwenza iinkqubo ezingalinganiyo nokungalunganga.
Kwizinzululwazi zentlalo, ukuphuhliswa kwembono yabesifazane kunye neengcamango zesifazane zisoloko ziye malunga nokugxilwa kwimiba yabantu abamhlophe abanamalungelo ekuqulunqeni iingxaki zentlalo, indlela yokuzifunda, indlela esinokuyifunda ngayo, into esiphetha ngayo ngabo, kwaye oko sizama ukukwenza ngabo njengabantu.
Inzululwazi yoluntu yoluntu iqalisa ngokukhupha iingcamango ezivela kwimbono ethile yabantu abamhlophe abamalungelo. Oku akuthethi nje ukuphinda uhlalutye inzululwazi yoluntu ukuba ingabi ngamalungelo abantu, kodwa kwakhona, ukucaca ukukhanya , ubulili bobuhlanga, ubukhulu bezinga eliphezulu kunye neklasi eliphezulu, ubuchule kunye nezinye izinto ezibonakalayo ngokubanzi ukuze kuvelwe isayensi yoluntu elwa nokungalingani kunye ikhuthaza ukulingana ngokufakwa.
UPatricia Hill Collins , omnye wabantu abaninzi abaphumeleleyo nabalulekayo baseMelika abaphila namhlanje, kubhekiselwe kule ndlela ekuboneni ihlabathi kunye nabantu balo "njengendlela yokubambisana ." Le ndlela iyakwazi ukuba iinkqubo zamandla kunye nelungelo, kunye neengcinezelo, zisebenza kunye, zidibanisa, zithembele. Le ngcamango ibe yinto ebalulekileyo kumabhinqa yanamhlanje kuba ukuqonda ukungalingani kukuphambili ekuqondeni nokulwa nokungalingani.
Ukuxubusha kwe-Collins yombono (kunye neyona nto iphila ngayo) yinto eyenza uhlanga, iklasi, ubulili, ubuzwe, ubuchule kunye nezinye izinto ezininzi eziyimfuneko ukuba zibandakanyeke kwimbono yabesifazane. Kuba, enye ayisoze nje yinkwenkwe okanye indoda: enye ichazwa kwaye isebenza ngaphakathi kwezinye izakhiwo ezentlalo ezineempembelelo ezibonakalayo ezenza amava, amathuba okuphila, iimbono kunye nexabiso.
Ngoko yintoni okwenene ubufazi? Ubufazi bumalunga nokulwa nokungalingani kuzo zonke iifom zayo, kubandakanywa ukukhwabanisa, ubundlobongela, i- colonialism yamazwe ngamazwe , i-heterosexism kunye nokuzondwa kwabantu, ukuxhatshazwa kwabantu, ukunyamezelana kwezenkolo, kwaye kunjalo, ingxaki eqhubekayo yobundlobongela. Kwakhona malunga nokulwa nale nqanaba lehlabathi, kwaye kungekhona nje kwimimandla yethu nakwiimimandla, kuba sonke sinxulumene neenkqubo zehlabathi kunye nolawulo, kwaye ngenxa yoko, amandla, ilungelo kunye nokungalingani kusebenza kwihlabathi lonke .
Ngaphandle kwePlint: Okufuneka Ukwazi NgezoLuntu ezinobungozi
Ukuqonda i-Gender Pay Gap kunye nendlela echaphazela ngayo abafazi
Isikhokelo soLuntu kwiNkcubeko yePapa
Imifanekiso yeeWhale kunye neeprofayili
Iimviwo zeYunivesithi yaseMarywood
Ileta yesincomo yeSampula - IsiCwangciso seShishini seShishini
Iiphambili ezili-10 eziLungileyo iingoma
Imimiselo yee-Airline zase-US: Izinto zeMntu ezivunyelwe kwi-Flight